Khamiista, Sebtember 22, 2005 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Runtii wax badan maahan inay igu farxiso. Waxaan ku jiray fasalka tababarka Powerpoint maalin dhaweyd. Fasalka wuu fiicnaa… Waxaan helay dhowr talooyin. Midka ugu weyn ee aan iskala tegey, in kastoo, uusan shaqo ku lahayn Powerpoint.
Tababaraha ayaa na tusayay sida loo tuuro shaashadda muraayad daaqadeena soo bandhigitaankeena. Waxaan had iyo jeer garaacaa batoonka PRT SC (Daabac Shaashadda) waxaanan ku gooyn doonaa sawirka Rinjiga. Laakiin wuxuu nagu qasbay inaan gujino ALT-PRT SC…
Waxay sameysaa shaashad kaliya oo leh daaqada firfircoon. Macaan !! (Wuxuu sidoo kale na tusay shaqooyinka dalagga ee Powerpoint sidoo)
Waa waxyaabaha yar yar ee nolosha…
Tags: hooseMaababka gaabankorontodariiqa korontadaprt-sc